कछुवा आकारको औंठी लगाउँदा फाइदै-फाइदा « Khabarhub
कछुवा आकारको औंठी लगाउँदा फाइदै-फाइदा
कछुवाको आकारमा बनेको अ‍ैठी लगाउने चलन पछिल्लो समय बढेको छ । तर यस अंगुठीको विशेषता के हो, यसको प्रभाव कस्तो पर्छ र यसलाई धारण गर्दाको समयमा कस्तो सावधानि अपनाउँनुपर्छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ ।
किन लगाइन्छ कछुवा आकारको औंठी
कछुवा भगवान विष्णुको अवतारको स्वरुप मानिन्छ । जसको सहयोगबाट समुद्र मन्थनबाट देवी लक्ष्मी प्रकट हुनुभएको थियो । वास्तुशास्त्रमा पनि यसको महत्व निकै छ । मान्यताहरुका अनुसार यो औंठीको प्रभावबाट यसलाई लगाउने व्यक्तिको जीवनमा सुखद् बदलाव आउँछ ।
जीवनमा शीतलता एवं सौम्यता
जसको व्यवहार उग्र हुन्छ कछुवा आकारको औंठीले उनीहरुको व्यवहारलाई सन्तुलित गरेर शान्त बनाउन मदत गर्छ । ज्योतिषका अनुसार कछुवा पानीमा बस्ने जीव भएका कारण यसको सम्बन्ध माता लक्ष्मीसँग हुन्छ किनकी दुबैको उत्पत्ति जलबाट भएको हो । साथ है जलको गुण शीतलता हो । यसकारण यसले व्यक्तिको उग्रता कम गर्न सहयोग गर्छ । कछुवा गम्भीर र अन्तरमुखी जीव हो यसको प्रभाव व्यक्तित्वमा पर्न जान्छ ।
धारण गर्नेसमयमा के ध्यान दिने ?
कछुवाको आकार भएको औंठी सधै चाँदीमा लगाउन पर्छ । यदी कुनै अन्य धातुमा लगाइयो भने आफ्नो राशि अनुसारको रत्न जोडेर लगाउनु पर्छ ।
कता फर्काउने ?
औंठी कतातर्फ फर्काउने भन्ने विषयले पनि यसको प्रभावका असर गर्छ । औंठीमा कछुवाको मुख आफ्नो तर्फ फर्काउन जरुरी छ । यसले धन तपाईंतर्फ आकर्षित हुनेछ । यदी तपाईंले औंठी लगाउँदा कछुवाको मुख बाहिरतर्फ फर्किए धन एकत्रित गर्न र धन वृद्धिमा बाधा उत्पन्न हुन जान्छ ।
तपाईले यो औंठी लगाउनु भन्दा पहिला यसको पुजा गर्न जरुरी छ । यो औंठीको पीठमा श्री लेखाउनुपर्छ ।
यो हो लगाउने विधी
कुनै पनि पूर्णिमाको दिन यो औंठी घर ल्याएर गाईको दूध, दही, गंगाजल, मह तथा तुलसीको पत्रलाई मिलाएर पञ्चामृत बनाउने । अब भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मीको सामुन्ने गाईको घ्यूबाट दियो बालेर ‘ओम भगवते कुर्मायै ह्रीं नमः’ मन्त्रले एक माला जप गर्नुहोस् ।
सबैले हुन्न लगाउन
ज्योतिषका अनुसार कर्कट, वृश्चिक तथा मीन राशिवाला मानिसलाई कछुवा आकारको औंठी लगाउन बर्जित गरिएको छ । यसो गर्दा यी राशी भएकालाई शुभ फल प्राप्त हुँदैन ।
प्रकाशित मिति : २१ माघ २०७५, सोमबार ८ : २९ बजे
यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफूलको मूल्य
काठमाडौँ- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले दिएको थोक
नागरिकता विधेयक चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्नुपर्छ : सभामुख सापकोटा
काठमाडौँ – सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनबाट